Wararka Maanta: Axad, Apr 4 , 2021-Qaramada Midoobay oo cambaaraysay weeraradii Alshabaab ku qaadeen Bariire iyo Awdheegle
James Swan ayaa ammaanay ciidamada Soomaaliya oo uu sheegay in ay si cad u xasuusinayaan sida ay maalin kaste u sameynayaan naf hurnimada ay ku badbaadinayaan shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa weeraradan lagu bartilmaameedsaday ciidamada Soomaaliya. Tani waa mid si cad inoo xusuusinaysa naf-hurnimada maalin kasta ay sameyaan askarta Soomaaliyeed ee sida geesiminada leh u dagaallama si ay u badbaadiyaan Soomaaliya iyo dadkeedaba,” ayuu yiri James Swan.
Danjiraha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay askartii ku geeriyooday weerarka ka dhacay Bariire iyo Awdheegle, isagoo kuwii ku dhaawacmayna u rajeeyay caafimaad deg deg ah.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarada, waxaana lagu soo waramayaa in qasaaro lixaad leh uu ka soo gaaray iska caabinta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.